အောက်ကျ နောက်ကျ - Yangon Media Group
+++ မောင်လှမျိုး( ချင်းချောင်းခြံ ) +++
” သူများနဲ့ယှဉ်ရင် အောက်ကျနောက်ကျ မဖြစ်အောင် စာကို သေသေချာချာ ကြိုးစားနော်သား”
ဟု ကျွန်တော်ငယ်စဉ်က ပြောခဲ့သော အမေ့ဆုံးမစကားကို သတိရစဉ်တိုင်း ပြန်လည်ကြားယောင်မိတတ်သည်။ မူလတန်းအရွယ်က အိမ်ငှားနေရသည်။ အိမ်ရှင်က ခေါင်းရင်းခန်း၊ ကျွန်တော်တို့မိသားစုက ခြေရင်းခန်း။ ပထမတန်းကျောင်းသားအရွယ်မို့ စာကို အော်ကျက်မိသည်။ စာအော်ကျက်ချိန်သည် ည ၉နာရီ မထိုးတတ်သေး။ ခေါင်းရင်းခန်းမှ အိမ်ရှင်အဘွားကြီးက ထရံပုတ်သည်။
”မောင်လှမျိုးရေ စာတိုးတိုးကျက်ပါ၊ အိပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်”ဟု လှမ်းပြော၏။ ”သားကြီး အိပ်တော့” ဟု အမေ ပြောသည်။
ကျောင်းပိတ်ရက်တွင် အိမ်နီးချင်းကစား ဖော်တွေနှင့် ကစားသည့်အခါရှိသလို ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာကိုယ် အရုပ်ပေါင်းစုံ၊ ပစ္စည်းပေါင်းစုံ ဖြင့် ကိုယ့်ဘာသာဇာတ်လမ်းဆင်၍ ကစားသည်လည်း ရှိခဲ့သည်။ စစ်ပွဲတွေကို ဇာတ်လမ်းဆင်သည်၊ လူဆိုးနှင့်ရဲ ဇာတ်လမ်းဆင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ မီးလောင်ပြင်ကို အသားပေးသည့်ဇာတ်လမ်းမျိုး။ မည်သည့်ဇာတ်လမ်းမျိုးကိုမဆို အရုပ်များ၊ ဇာတ်ဝင်ပစ္စည်းများကို လက်ဖြင့်နေရာ ရွေ့လျားကစားသကဲ့သို့ ပါးစပ်မှလည်း သက်ဆိုင်ရာဇာတ်ဝင်ခန်းနှင့် ညီတူစွာ အသံမျိုးစုံ ထွက်နေမိ၏။ လူဆိုးလည်း ကျွန်တော့်အသံ၊ ရဲ၏အသံလည်း ကျွန်တော့်အသံ။ ရဲနှင့်လူဆိုး လက်သီးထိုးကြပြန်လျှင်လည်း ကျွန်တော့်ပါးစပ်က လက်သီးထိုးသံပြုစမြဲ။ စစ်တိုက်သည့်အခါတွင်လည်း လက်နက်ကြီးကျသံ၊ ဗုံးကြဲသံ၊ ဗုံးကွဲသံ၊ ညာသံပေးသံ၊ စက်သေနတ်သံ၊ ကျားထိုးသံ…စသည်တို့ကိုလည်း မရပ်မနား တရစပ် ပါးစပ် ဖြင့် သရုပ်ဖော်အသံပြုဖြစ်၏။
ဝမ်း…ရော်….။ အွမ်း …. ရော….”
မီးလောင်ပြင်သို့ အပြင်းမောင်းနှင်လာသည့် မီးသတ်ကားဥသြဆွဲသံကို ကျွန်တော် နားလည်သလို အသံပြုသည်။ ခေါင်းရင်းခန်းမှ ထရံပုတ်သံကြားရ၏။
”မောင်လှမျိုးရေ အဲဒီမီးသတ်ကားသံမျိုးနဲ့ မဆော့ပါနဲ့။ ရင်တွေတုန်လွန်းလို့ပါ”
”ကိုယ့်မှာ အိမ်ပိုင်မရှိရင် အောက်ကျ နောက်ကျဖြစ်တယ်သား။ အိမ်ပိုင်အောင် လုပ်ရမယ်”ဟု အမေပြော၏။
အမေရော အဖေရော ခေတ်ပညာတတ် တွေ မဟုတ်ကြ။ မုံရွာခရိုင် ဘုတလင်မြို့နယ်ဘက်က အညာသူအညာသားတွေ ဖြစ်ကြသည်။ အဖေက ဒုတိယတန်းလောက်သာ ကျောင်းတက်ဖူးပြီး အမေက ဘုန်းကြီးကျောင်း လောက်တွင်သာ သင်ပုန်းကြီးကုန်သည်အထိ စာသင်ဖူးကြောင်း သိရ၏။ (သို့သော် အားလပ်သည့်အခါတိုင်း အမေစာဖတ်၏)။
ခေတ်ပညာမတတ်သော်လည်း အမေ့မှာ ခေတ်ကပေးသောပညာကို သိရှိဟန်တူ၏။ ရန်ကုန်မှာ အိမ်ပိုင်မရှိလျှင် နေရထိုင်ရ အဆင်မပြေလှကြောင်း အမေ သိရှိနေလေသည်။ ကျွန်တော့်တစ်သက်လုံးတွင် အိမ်လေးလုံးမျှသာ ပြောင်းဖူးသည်။ ပထမအိမ်၊ ဒုတိယအိမ်၊ တတိ ယ အိမ်၊ စတုတ္ထအိမ်တို့တွင် အိမ်ငှားဘဝဖြင့် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရ၏။ စတုတ္ထအိမ်တွင် အိမ်ရှင်နှင့် အခန်းချင်းကပ်နေရသဖြင့် နေထိုင်ရသည်မှာ မလွတ်လပ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ပထမဦးဆုံးနေခဲ့ဖူးသည့်အိမ်တွင် ပဉ္စမအကြိမ်အဖြစ် ပြောင်းရွှေ့အိမ်ငှား နေဖြစ်ပြန်၏။ထိုအိမ်ကို ဈေးရောင်းသော အလုပ်လုပ်ကိုင်စုဆောင်းလျက် အဖေနှင့်အမေ အပိုင်ဝယ်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။
”ကိုယ့်မှာ အိမ်ပိုင်မရှိရင် အောက်ကျ နောက်ကျဖြစ်တယ်”
ဟူသော အမေ့သြဝါဒသည် ကျွန်တော့်ဘဝအတွက် အလွန်အသုံးဝင် သော ဘဝဒဿနဖြစ်ခဲ့၏။ အမေသည်လည်း ကိုယ့်သြဝါဒနှင့်ကိုယ် ပြောသည့်အတိုင်း ဖြစ် မြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ရှာပေသည်။ မည်သည့်ခေတ်ပညာမှမတတ်။ မည်သည့်ကျောင်းတော်ကြီးများတွင်မျှ တက်ရောက် ပညာသင်ကြားခွင့်မရခဲ့ပါပဲလျက် ခေတ်ကပေး သောအသိကို ဥာဏ်ပညာအဖြစ် အသွင်ပြောင်းကာ ဝီရိယစိုက်လျက် တတ်သိသလောက်စွမ်းအားဖြင့် ဘဝတိုးတက်အောင် ကြိုးပမ်းနိုင်ခဲ့ပေသည်။
”သူများနဲ့ယှဉ်ရင် အောက်ကျနောက်ကျ မဖြစ်အောင် စာကို သေသေချာချာကြိုးစား နော်..သား”
ဟု ဆုံးမခဲ့သော အမေ့စကားကို ကျွန်တော့်မှာ မြေဝယ်မကျ နားထောင်လိုက်နာနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ချေ။ သူငယ်တန်းတွင် အဆင့်(တစ်) ရခဲ့ဖူးသည်မှအပ ကျောင်းသားဘဝတစ်လျှောက် ဘယ်တော့မှ ကျွန်တော် ပထမမရဖူးခဲ့ချေ။
စာမတော်လျှင် အောက်ကျနောက်ကျ ဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်ခဲ့သော်လည်း စာတော်အောင် ကျွန်တော် မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပေ။ သင်ကြားခဲ့သည့်စာတွေကို နားလည်သဘောပေါက်အောင်သာ ဖတ်ရှုမှတ်သားခဲ့မိပြီး စာမေးပွဲ အောင် မြင်ရန်အတွက်မူ ကျွန်တော် သေသေချာချာ မကျက်မှတ်နိုင်ခဲ့။ ထို့ကြောင့် အမေ့စိတ်တိုင်းကျ အမေဖြစ် စေလိုသည့် စာတော်သော ခေတ်ပညာတတ် ကြီးတစ်ယောက် ကျွန်တော် မဖြစ်ခဲ့တော့ချေ။
သို့သော် သူများနှင့်ယှဉ်လျှင် အောက်ကျ နောက်ကျမဖြစ်အောင်တော့ ကျွန်တော် အစဉ် ကြိုးစားနေခဲ့သည်။ ”မပူပါနဲ့အမေရယ်၊ ကျွန် တော် လူတော်တစ်ယောက်မဖြစ်ရင်တောင် လူညံ့တစ်ယောက်တော့ မဖြစ်စေရပါဘူး”ဟု အမေ့ကို ကတိအထပ်ထပ်ပေးခဲ့ဖူးသည်။ ပေးခဲ့သည့် ကတိအတိုင်း ကျွန်တော့်ရည်ရွယ်ရာ ဘဝပန်းတိုင်သို့ နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အရောက်သွားနိုင်ခဲ့သည်ကို အမေရော အဖေပါ မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်သွားခဲ့ကြပါသည်။ သို့အတွက်လည်း ကျွန်တော့်မှာ ဂုဏ်ယူစွာ ဖြေသာနေသာခဲ့ရ၏။
အောက်ကျ၊ ကြိ – အဆင့်အတန်းအခြေအနေ စသည် နိမ့်ကျသည်။
နောက်ကျ၊ ကြိ – အချိန်လွန်ပြီးမှဖြစ်သည်။ နှောင်းသည်။
အောက်ကျနောက်ကျ၊ ကြိဝိ – အဆင့်အတန်းအခြေအနေ စသည်နိမ့်ကျသိမ်ငယ်စွာ။
အောက်ကျနောက်ကျ..ဟူသောစကားကို သေသေချာချာပြောဖြစ်ခဲ့သည့် အမေသည် အထက်ပါ(မြန်မာအဘိဓာန်ထဲတွင်ပါသည့်) အဓိပ္ပာယ်များအတိုင်း တိတိကျကျ သိတတ်ပြီး ပြောခဲ့ခြင်းမဟုတ်။ ဘဝအခြေအနေ၊ ခေတ်၏ရေမြေအခြေအနေက အမေ့ကို လှုံ့ဆော်သင်အံလိုက်သဖြင့် ဘဝအသိ ခေတ်အသိဖြင့် သားဖြစ်သူ ကျွန် တော့်ကို နှုတ်မှတဖွဖွ ပြောပြခဲ့ဟန်တူပေသည်။ ကျောင်းပညာမတတ်သော်လည်း ခေတ်ပညာကို အမေတတ်ခဲ့သည့်အလား သားဖြစ်သူ ကျွန်တော့်ကို သူတစ်ပါးနှင့်ယှဉ်လျှင် အောက်ကျ နောက်ကျမဖြစ်ဖို့ ကိုယ်ပိုင်အိမ်မရှိဘဲ(အောက် ကျနောက်ကျ)မနေဖို့ သင်ကြားနိုင်ခဲ့လေ၏။ အမေ့၏ ထိုသင်ကြားမှုအနက်(စာမတော်ခဲ့သည်မှအပ) အောက်ကျနောက်ကျမဖြစ် အောင် ကျွန်တော် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုပင် အမေဂုဏ်ယူနေဖူးသည်။
အဖေ ကွယ်လွန်ပြီး ကိုးနှစ်လောက်အကြာတွင် အမေကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ အမေ မကွယ်လွန်မီ ငါးနှစ်လောက်က ‘အောက်ကျနောက်ကျ’ ..ဟူသော အမေ ပြောခဲ့ဖူးသည့်စကားနှင့်ပတ်သက်ပြီး သားအမိနှစ်ယောက် စကားဖောင်ဖွဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ”သူများအိမ်မှာ ငှားနေရတာ စာကျက်တာတောင် မလွတ်လပ်ဘူးနော်အမေ” ဟု အစချီကာ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်များများစွာ ပြောဖြစ်ခဲ့ကြ၏။
”သားကို အောက်ကျနောက်ကျဖြစ်မှာ အမေ စိုးရိမ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လား”
”ဒါပေါ့။ သားသမီးတိုင်းကို စိုးရိမ်တာပေါ့”
”သားငယ်ငယ်က သားကို အမေစိုးရိမ်သလို အခု အမေ့ကိုလဲ သားစိုးရိမ်တယ်”
”ဘယ်သူနဲ့ယှဉ်ယှဉ် ကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့တဲ့ အမေ့အနေနဲ့ အောက်ကျနောက်ကျစရာ မရှိပါဘူး အမေရဲ့။ ဒါပေမဲ့ သားငယ်ငယ်က စာမေးပွဲကျမှာကို အမေစိုးရိမ်သလိုမျိုး၊ အမေ့ကိုလည်း အပါယ်ကျမှာ သားစိုးရိမ်တယ်အမေ။ ပြီးတော့ ကျန်းမာနေတုန်းအချိန်မှာ ဘာဝနာ မပွားများထားတဲ့သူတွေ၊ သေခါနီးအချိန်ကျမှ ဘာကိုဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမှန်းမသိတဲ့အသိ နောက်ကျတဲ့သူတွေလို အမေနောက်ကျမှာ စိုးရိမ်မိတယ်”
”မစိုးရိမ်နဲ့။ အမေ ဘာလုပ်ရမလဲပြော”
ကျွန်တော် တတ်သလောက် မှတ်သလောက် ဗဟုသုတတို့ဖြင့် အမေ ဘာဝနာပွားနိုင်စေရန် အကြံပြုသင်ကြားပေးဖြစ်ခဲ့သည်။ နိဗ္ဗာန်ရောက် ကြောင်းအထိ မဆောင်ရွက်နိုင်ပါကြောင်း အမေဝန်ခံသည်။ ထို့ကြောင့် သံသရာဇာတ်သိမ်း၊ ခန္ဓာငြိမ်းသည်အထိ ကျွန်တော် မကူညီနိုင်သဖြင့် အပါယ်မကျအောင် မည်သည့်ဝေဒနာကိုမဆို မည်သို့နှလုံးသွင်းရမည်ဆိုသည်ကို အဆင်သင့်ဖြစ်သည်အထိ ကျွန်တော် အလေ့အကျင့် ပေးဖြစ်နိုင်ခဲ့၏။ ထိုအလေ့အကျင့်တို့ဖြင့် မှန်ကန်စွာနေထိုင်လျက် ဆိုးရွားသောရောဂါကို တည်ငြိမ်စွာ အမေရင်ဆိုင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ (ကျွန်တော့် အမေ အောက်ကျနောက်ကျမဖြစ်ခဲ့ဘူးဟု ယူဆဖြစ်ချေသည်)။ ရောဂါဆိုးကို ငါးနှစ်ခန့် ရင်ဆိုင်ခံစား နေရသည့်တိုင် အသွားအလာမပျက်၊ ဘုရားသွားကျောင်းတက်မပျက် ဥပုသ်သီလမပျက်ဘဲ နေထိုင်နိုင်ခဲ့၏။ (ညဘက် ဆေးရုံတက်ပြီး မနက်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့လေသည်)။
ဘဝအခြေအနေ အောက်ကျနောက်ကျ မဖြစ်အောင် အမေဆုံးမခဲ့သည်။ ဆုံးမခဲ့သည့် အမေ့စကားအတိုင်း ကျွန်တော်ရုန်းကန်ကြိုး စားခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရုန်းကန်ရင်းက မတရားမှု ဒုစရိုက်မှုတို့ကို ကျူးလွန်မိခဲ့ပါက အမေ့မျက်ကွယ်မှာ ကျွန်တော် အောက်ကျနိုင်ချေသည်။ အပါယ် ကျနိုင်ခြေသည်)။ အသိမဲ့ သတိမဲ့စွာ နေထိုင် ရှင်သန်မိပြန်လျှင်လည်း သေတွင်းဝသို့ရောက် သည့်အချိန်တွင် ကျွန်တော်(ဘာကို ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမှန်းမသိဘဲ) နောက်ကျနောင်တ ရသွားနိုင်ပေမည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော့်မှာ လောကီရေးတွင် ‘အောက်ကျနောက်ကျ’မဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်းနေထိုင်ရသကဲ့သို့ လောကုတ္တရာအရေးအတွက်လည်း ‘အောက်မကျအောင်၊ နောက်မကျအောင်’ သတိဆောင်လျက် အဝိဇ္ဇာပကတိ အမှောင်ကို အသိတန်ဆောင်အလင်းရောင် ဖြင့် ထွန်းလင်းနိုင်အောင် ကြိုးစားနေရပါသေး၏။
‘အောက်ကျနောက်ကျ’ ဟူသည့် အမေ့ သြဝါဒသည် ဘဝ၏ ထာဝစဉ် သတိပေးစကား။ (၂ဝဝ၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ တွင်) အမေကွယ်လွန်ခဲ့သည်မှာ ခြောက်နှစ်ပြည့်တော့မည်။
(အမေ့သတိပေးစကားဖြင့် ကျွန်တော် လုံခြုံစွာနေထိုင်လျက်ရှိ၏)။
မောင်လှမျိုး( ချင်းချောင်းခြံ )
မရှင်းလင်းသော ဗမာတိုင်းရင်းသားများ ကိုယ်စားပြုမှုနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ
ဆေးစစ်မှု ကျရှုံးခဲ့ခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲကို ပီရူးတိုက်စစ်မှူး ဂွါရဲရိုး လွဲချေ??
ရွှေကူမြို့တွင် ရေကြီးမှုကြောင့် အခြေခံပညာကျောင်း ကိုးကျောင်း ပိတ်ထားရ